စာအုပ် အနှစ်ချုပ် ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ဖူးလား ? | MyanLearn Article
စာအုပ် အနှစ်ချုပ် ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ဖူးလား ?
👉 တခါတလေ စာအုပ်ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားပြီးမှ ဘယ်စာအုပ် ရွေးဖတ်ရမလဲ၊ ဝယ်လိုက်ပြီးမှ ကိုယ့်အကြိုက်မဟုတ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုပြီး ကြုံနေရတာမျိုး၊
👉 ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာ စာအုပ်အမျိုးအစားတွေ ဖတ်ချင်ပါရက် ဘာသာ စကား အခက်အခဲကြောင့် ဆိုလိုရင်း တိတိကျကျ နားမလည်မှာ၊စာမျက်နှာပေါင်းများစွာ ဖတ်ရမှာ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတာမျိုး၊
👉 စာအုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ကြည့်ပြီး ဝယ်ဖို့ ချင့်ချိန်နေရတာမျိုး၊
👉 တခါတလေကျတော့လည်း ကိုယ် မဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် အမျိုးအစားမျိုးကို စမ်းဖတ်ကြည့်ချင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် စာအုပ်အထူကြီးကို အစအဆုံး စိတ်ဝင်စားပါ့မလား ဆိုတာက စလို့
👉 စာအုပ်ကိုင်ပြီး အချိန်သေချာပေး စာမဖတ်နိုင် ဖြစ်နေကြတာမျိုး စသဖြင့် ကြုံဖူး ဖြစ်ဖူး ကြလား ?
• Myanlearn စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကို ဘယ်လိုဖတ်ရမှာလဲ ?
အက်ပလီကေးရှင်း (App) download လုပ်လိုက်ရုံနဲ့
☑ အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီး စာဖတ်ရုံသာမက အသံဖိုင်ပါ ပါဝင်တာမို့ စာအုပ်တွေကို Audiobook အနေနဲ့ လည်းနားထောင်နိုင်မယ်။
☑ စာအုပ် အနှစ်ချုပ် သက်သက်တင်မက ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လက်တွေ့နယ်ပယ်က အကြောင်းအရာတွေနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ရေးသားထာတာမို့ အလွယ်တကူ သင်ယူ အသုံးချနိုင်တယ်။
☑ ရုပ်ပုံဇယားတွေ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် ဖတ်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းရုံသာမက မြင်လွယ် မှတ်လွယ်တယ်။
☑ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကို ဝယ်ယူချင်ဆိုရင်တော့ စာအုပ်တန်ဖိုး အနေနဲ့လည်း တစ်အုပ်ကို မြန်မာငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်တည်းသာ ကျသင့်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် မိမိ နှစ်သက်ရာ Kpay/ Wave Pay / KBZ Bank / AYA Bank တို့မှလည်း အလွယ်တကူ ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်ဝါသနာပါသူတိုင်း အခုပဲ Myanlearn App ကို download လုပ်ပြီး စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ရဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်း ကြည့်ကြလိုက်ပါဦး။
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့လို စာဖတ်သူတွေ စာဖတ်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာလေးတွေပါ။ အချို့ဆို စာဖတ်ချင်ပါရက်နဲ့ ဒီလို ပြဿနာ အသေးအဖွဲလေးတွေကြောင့်ပဲ စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်ကြတာမျိုးကနေ စာအုပ်စာပေနဲ့ ဝေးကွာသွားတဲ့အထိကို ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ဒီလို အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး MyanLearn စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာကို ဖန်တီးထားရတာပါ။
• ဒီတော့ MyanLearn စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာ ဘာလဲပေါ့။
နိုင်ငံတကာအရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင် စာအုပ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ( International Best-seller ) ကို အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ ဖန်တီးရေးသားထားတာပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် နာမည် အတိုင်းပဲ စာအုပ် တစ်အုပ်ရဲ့ အနှစ်အရသာ ကို ကောက်နုတ်ပေါင်းချုပ်ထားတာမျိုးပေါ့။ဟင်းပွဲတစ်ပွဲမှာ အရသာအရှိဆုံး အပိုင်းကိုမှ ချက်ချင်း အသင့် ခူးခပ် စားလိုက်ရသလို ခံစားမှုမျိုးပေါ့။မူရင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်း ၊ ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ပြောပြချင်တဲ့ မက်ဆေ့မျိုးတွေ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ၊ လက်တွေ့အသုံးချသင့်တာတွေ စတာတွေကို လိုတိုရှင်း ရေးသား ထားတာကြောင့် လွယ်လင့်တကူ ဖတ်ရှု မှတ်သားနိုင်တာမျိုးပါ။
ဒါကြောင့် အကယ်၍များ သင်က
☑ နိုင်ငံတကာစာအုပ်စာပေတွေကို လေ့လာ ဖတ်ရှုသူတွေ
☑ အားလပ်ချိန်ခဏမှာ စာဖတ်ချင်သူတွေ
☑ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ အဓိက ပေးချင်တဲ့ သင်ခန်းစာ၊ အကြောင်းအရာနဲ့ သင်ယူရမယ့် အချက်တွေကို လိုတိုရှင်း လေ့လာပြီး လက်တွေ့မှာ အသုံးချလိုသူတွေ၊
☑ နောက်ပြီး မူရင်းစာအုပ်အရေးအသားကိုမှ ပြန်လည် ကောက်နုတ်သုံးသပ်ထားတဲ့ ထိထိမိမိ အရေးအသားမျိုးတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်လိုသူတွေ၊
☑ စာပေနဲ့ အဆက်မပြတ် လေ့လာ ဖတ်ရှုလိုသူ ဆိုရင်တော့ ဒီ MyanLearn စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေက သင့်အတွက်ပါပဲ။